အလင်းရောင်ကြယ်များ: March 2015
တပ်မတော်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် မြေနီကုန်း ခုံးကျော်တံတားအား ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းသူများနှင့် သပိတ်ကျောင်းသားများ ရာသက်ပန် သွားလာမည် မဟုတ်ဟုလှော်ဘီသတင်း(ဖေ့စ်ဘုတ်မှ)
"သူတို့တွေ နိုင်ငံခြားတွေသွားတော့ သူများနိုင်ငံက ခုံးကျော်တံတားတွေ ကြည့်ပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/26/2015 07:52:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/26/2015 07:48:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
RFA မှရေးသားသော မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမြေနေရာ အင်အားသုံးဖယ်ရှားသတင်း
လှည်း ကူး မြို့ နယ်၊ မင်း ကုန်း အုပ် စု၊ လေး အိမ် စု ကျေး ရွာ အ နီး ရှိ ကြက် ဆူ စိုက် ခင်း အ တွင်း ၀င် ရောက် နေ ထိုင် စိုက် ပျိုး ကြ သူ များ ကို မတ် လ ၂၅ ရက် နေ့ နံက် ၇ နာ ရီ အချိန် တွင် ရန် ကုန် မြို့ တော် စည် ပင် သာ ယာ ရေး ကော် မ တီ မှ ဌာ န မှူး ဦး တင် ကို ကို ဦး ဆောင် ၍ အင် အား ၅၀၀ ခန့် က ဒေ သ ခံ များ အား ကြို တင် အ ကြောင်း ကြား ခြင်း မ ရှိ ပဲ ၀င် ရောက် ဖျက် စီး သွား ကြောင်း === ဓါတ်ပုံ - U Nyo Tun (fb)
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/26/2015 07:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မတ်လ ၂၄ရက် ညက အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းခြင်းနောက်ဆက်တွဲမိူးသီးကြွေကျ သတင်း
မတ်လ ၂၄ရက် ညက အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းပြီး မတ်လ ၂၄ရက် နဲ့ ၂၅ရက်မှာ မန္တလေးမြို့ ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တို့မှာ မိုးသီးကြွေခဲ့ပါတယ်။
မိုးသီးကြွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးလေဝသပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်က မိုးသီးကြွေကျခြင်းရဲ့ အကြောင်းနဲ့ အကျိုးဆက်ကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားတာကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဦးထွန်းလွန်ရဲ့ ရေးသားချက် အပြည့်အစုံကတော့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/26/2015 07:43:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဖေ့စ်ဘုတ်မှ တရုပ်မုန်းတီးသူမြန်မာမျုိုးချစ်တစ်ဦးခံစားချက်
အကောင်များလို့ကြောက်နေရမယ်ဆိုလျင် ခြင်္သေ့တွေ နေစရာမရှိ့တော့ဘူးပေါ့ကွာ သူများပိုင်နက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ကျူးလွန်လို့ရတယ်ဆို မင့်နှတွေ အပြင်မထွက်စေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ငတုံးတွေမဟုတ်ဘူး မင့်တို့ဖအေကျော် ပထွေးကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ သူတွေရှိ့နေသရွှေ့ မြန်မာ့တပ်မတော် က တိုက်နေမှာပဲဆိုတာ သိထားပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/22/2015 09:27:00 am2comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံအား မွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ရန် Islamization လုပ်ဆောင်နေသော လူ (မွတ်စလင်)များနှင့် မြန်မာ လောက်ကောင်၊ လော်ဘီများ၊ သတင်းလိမ်မီဒီယာများ
(မွတ်စလင်) ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ.နေ (ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောက်ရေးကွန်ယက်) ။။။ ဦးနေမျိုးဝေ မှ ကုန်အာရ်ကျမ်းအား ပြည်သူကို ချပြသဖြင့် ရှက်ရမ်းရမ်း ပြီး စော်ကားသောသူ။
၂။ အေးလွင် (မွတ်စလင်)(ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ.) ။။။ ဦးနေမျိုးဝေ မှ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/22/2015 09:19:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အပျိုစင်ဘ၀ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ Hilary Duff
မကြာသေးမီကမှ အိမ်ထောင်ကွာရှင်းထားတဲ့ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသမီး Hilary Duff ဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အကြောင်းတွေကို စတင်ပြောဆိုလာပါပြီ။ Cosmopolitan မဂ္ဂဇင်းနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တစ်ခုမှာ Hilary Duff က သူမ ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/22/2015 09:14:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/22/2015 09:06:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပညာသင်ဆုနဲ့ ဇွန်သဉ္ဖာ
မော်ဒယ်လ် ဇွန်သဉ္ဖာ (ဓာတ်ပုံ- zune thinzar facebook)
လက်ရှိ ဓာတ်ပုံ မော်ဒယ်လ်လောကမှာ sexy pose တွေနဲ့ လူသိများနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဇွန်သဉ္ဖာတယောက် နိုင်ငံတော် သမ္မတပညာသင်ဆုရဲ့ ရေးဖြေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖေ့ဘုတ် အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတွေထက်မှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/20/2015 11:03:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဗုဒ္ဓပုံ နားကြပ်တတ်သူများကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်
ဗုဒ္ဓပုံတော်ကို နားကြပ်တပ်ဆင်ကာ ကြော်ငြာခဲ့သည့် V Gastro Bar ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးထွန်သူရိန်နှင့် မန်နေဂျာများဖြစ်သည့် ဦးထွဋ်ကိုကိုလွင်၊ နယူးဇီလန် နိုင်ငံသား Mr.Philip တို့ကို ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂နှစ်နှင့် ၆လစီ ယနေ့ချမှတ်လိုက်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/20/2015 10:59:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လက်ပံတန်းတွင် အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ဆန္ဒပြသူများက မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့် အတားအဆီးများအား အတင်းဝင်ရောက် ဖယ်ရှား ရန် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/10/2015 10:40:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာ များကို ပြည်သူသို့ အသိပေးရန် အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားပြီးမှ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နောင်လာနောင်သားလူငယ်များ သင်ခန်းစာယူစေနိုင်ရန်နှင့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/02/2015 11:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
RFA မှရေးသားသော မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးေ...
မတ်လ ၂၄ရက် ညက အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းခြင်းနောက...
ဖေ့စ်ဘုတ်မှ တရုပ်မုန်းတီးသူမြန်မာမျုိုးချစ်တစ်ဦ...
မြန်မာနိုင်ငံအား မွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ရန် Islamizati...
အပျိုစင်ဘ၀ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်း တစ်စေ...
လက်ပံတန်းတွင် အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ဆန္ဒပြသူများ...